Wasiirka Arimaha Dibadda Somaliland Md. Maxamed Biixi Yoonis ayaa ka warramay xidhiidhka Somaliland iyo dalalka jaarka
Home Recent Articles Wasiirka Arimaha Dibadda Somaliland Md. Maxamed Biixi Yoonis ayaa ka warramay xidhiidhka Somaliland iyo dalalka jaarka
Wasiirka Arimaha Dibadda Somaliland Md. Maxamed Biixi Yoonis ayaa sheegay in xidhiidhka Somaliland iyo waddamada Jaarka ah sida jabuuti, Kenya iyo Itoobiya uu yahay mid xoogan.Wasiirka Arimahad Dibadda ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee inta badan loo xidho xadka u dhexeeya Somaliland iyo waddamada jaarka ay inta badan la xidhiidho sababo amaan darteed. Somaliland iyo Jabuuti ay isla og yihiin xadka la xidhay.
Wasiirka ayaa sheegay in hore ay Jabuuti u booqdeen Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran-cadde, Taliyaha Ciidamada Booliska Somaliland iyo Taliyaha Laanta amaanka Socdaalka, sidoo kalena ay hadda ku maqan yihiin dalak Jabuuti. Wasiirka ayaa sheegay in xidhitaanka Xadka ay dani ugu jirto amaanka labadda dal.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in wefti ka kooban 24 xubnood oo iskugu jiray wasiiro, masuuliyiinta dakadda Berbera, ganacsiga iyo amaanka ay ka qayb-galeen shir ka dhacaayey magaalada Diridhaba ee dalka Itoobiya kuwaasi oo shir la yeeshay masuuliyiinta dhigooda ah ee dalka Itoobiya, xubnahaasi ayaa sidoo kale u sii gogol xaadhay shir heer wasiir ah oo ay ku yeelan doonaana dalka Itoobiya oo dhawaan dhicin doona.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Somaliland iyo Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya isla qaateen in ay soo magacaabaan guddi isku dubaridda amaanka, ganacsiga iyo iskaashiga labada dal u dhexeeye. Wasiirka Maxamed Biixi ayaa sheegay in madaxweynaha Somaliland uu magacaabay guddi heer wasiir ah oo kala ah wasiirka Arimaha guddaha, Arimahada Dibadda, Wasiirka Qorshaynta Qaranka iyo Wasiirka Ganacisga kuwaasi oo kulan la yeelan doona dhigooda dalka Itoobiya.
Wasiirka Arimaha Dibadda Muddane Maxamed Biixi Yoonis ayaa sidoo kale ka hadlay xidhiidhka u dhexeeya Somaliland iyo Kenya. Wasiir ayaa sheegay in ay Somaliland ka furteen safaarad, dhismihiina ay kiraysanayaa. Wasiirka ayaa sheegay in Kenya ay si rasmi ah ugu ogolaatay Somaliland in ay Safaarad ka furtaan magalada Nairobi.